तपाईले पढ्न सक्ने सर्वश्रेष्ठ स्टिफन किंग पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग पुस्तकहरू
स्टीफन कि संसारकै सबैभन्दा प्रशंसित लेखक हुन्। उहाँ आफ्नो भयावह पुस्तकहरूको लागि विश्वव्यापी रूपमा चिनिनुहुन्छ, तर सत्य यो हो कि उसले अन्य कामहरूमा पनि पहिलो चरणहरू गरिसकेका छन, यद्यपि यस विषयवस्तुमा उनीहरूको सीमा छ, यति डरलाग्दो छैन। उनी si० भन्दा बढी उपन्यासका लेखक हुन्, र त्यो कथाहरू, छोटो उपन्यासहरू, गैर-फिक्शन पुस्तकहरू, लिपिहरू, र अन्य प्रकारका साहित्यिक पदहरूको गणना गर्दै छैन। तर यस महान विविधताको बावजुद, यो हुनु पर्छ कि लगभग सबै पाठकहरू सहमत छन् सबै भन्दा राम्रो स्टीफन किंग पुस्तकहरू के हुन्।
अक्टुलिडाड लिटरेटुरामा हामीले तपाईंलाई नजीक ल्याउने प्रस्ताव गरेका छौं जुन सब भन्दा राम्रो स्टीफन किंग पुस्तकहरू हुन् र ती किन हुन्। त्यसोभए यदि तपाईं तिनीहरूलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामीले तपाईंको लागि तयार गरेको संकलन पढ्न नबिर्सनुहोस्।
1 स्टीफन किंग को हो?
2 सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग पुस्तकहरू
2.1 स्टीफन किंग: यो
2.3 स्टीफन किंग: जस्तो म लेख्छु
2.5 स्टीफन किंग: डार्क टावर
2.7 स्टीफन कि:: ड्रीमकेचर
स्टीफन किंग को हो?
स्टीफन कि 1947को जन्म १ XNUMX। XNUMX मा माइनको पोर्टलैंडमा भएको थियो र सबैभन्दा मान्यता प्राप्त अमेरिकी लेखकहरू मध्ये एक हो, खास गरी उनको त्रास र रहस्य उपन्यासहरूका लागि। प्राय: ती सबै टेलिभिजन श्रृंखला वा सिनेमेटोग्राफिक फिल्महरूमा अनुकूलित गरिएको छ (वा भविष्यमा हुनेछ) र उनीहरूका पुस्तकहरू विश्वभर अनुवाद गरिएको छ।
अवश्य पनि, सुरुबाट सफल हुन शुरू गरेनयो s ० को दशकसम्म सफल भएन। तपाईको पहिलो उपन्यास के हो? खैर, पहिलो क्यारी थियो, एक उपन्यास जसमा लेखक आफैंले विश्वास गरेनन् र अझै पनि, आफ्नी पत्नीलाई धन्यवाद छ, उनले यो समाप्त गरे र यसलाई प्रकाशकलाई पठाए। यो सुरुमा त्यति धेरै सफल भएन (प्रकाशक आफैंले उसलाई आफ्नो समयको लागि थोरै पैसा दिए), तर सत्य यो हो कि ऊ सफल भयो र त्यसले उसलाई आफैलाई विशेष रुपले समर्पण गर्ने निर्णय गर्न बाध्य तुल्यायो।
यसैले, अन्य उपन्यासहरू जस्तै द स्यालेमको लूतको रहस्य, वा एक चिनिएका द शाइनिंग, बाहिर आउँदै थिए।
समय बित्दै जाँदा उनका उपन्यासहरू केवल प्रकाशकहरू र पाठकहरूको मात्र नभई निर्माताहरूका लागि पनि ध्यान आकर्षित गर्दै थिए जसले उनीहरूले उपन्यासहरूका फिल्महरू वा शृंखलाहरूमा पनि अनुकूलन गर्न थाले। र त्यसले यसलाई अझ सफल बनायो।
लेखकले लेखेको सबै समयलाई ध्यानमा राख्दै, यो सामान्य हो उनका सबै पुस्तकहरू मध्ये केहि छन् जुन सर्वश्रेष्ठ स्टिफन किंग पुस्तकहरू मानिन्छन्।
ती के हुन्? खैर, ती निम्न हुन्:
स्टीफन किंग: यो
यो पुस्तकहरू मध्ये एक हो जुन प्राय: मनमोहक पाठकहरू छन्। तर उनीहरूले पनि, उपन्यास पढेका बिना नै सिनेमामा बनेका अनुकूलनहरूसँग खुशी भए। किनभने हो, त्यहाँ धेरै छन्। यो दुर्लभ छ कि उनीहरूले सामान्यतया उपन्यासको एक भन्दा बढी रूपान्तरण गर्छन्, तर इट स्टीफन कि withको साथ उनी सफल भएका छन् र धेरै राम्रो नतिजाका साथ यो भनिएको हुनुपर्दछ।
यस अवस्थामा, योसँग "केहि" छ जुन तपाईं अरू पुस्तकहरूमा फेला पार्नुहुन्न। किनकि हामी वयस्कहरूका लागि कथाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, तर नायकहरू केटाकेटीहरू हुन्। थप रूपमा, उनीहरूको चारैतिर घुमाउने प्लट अलौकिक, अलौकिक र हो, डरलाग्दो परिस्थितिहरूले भरिएको हुन्छ।
र हामी खलनायकलाई भुल्न सक्दैनौं, लेखकले परिभाषित गरेको परिभाषा मध्ये एक हो। र यो यो हो कि क्रमहरू जुन जीवित छन् र यसले कसरी वर्णन गर्दछ यसले तपाईंको आफ्नै शरीरमा डर र आतंकलाई जगाउँछ।
कसले चम्कने को थाहा छैन? यदि तपाईं एक डराउने प्रेमी हुनुहुन्छ, यो सामान्य छ कि तपाईंलाई यो उपन्यास थाहा छ। यो सबैभन्दा प्रशंसित प्रेतवाधित घरहरू मध्ये एक हो (र वास्तवमा दोस्रो भाग हालसालै गरिएको थियो जुन पहिलो चलचित्रको सेटि recre् पुनः सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो)।
सबै भन्दा राम्रो स्टीफन किंग पुस्तकहरु बीच, यो एक हुनु पर्छ अनिवार्य किनभने लेखकले तपाईको शरीरमा डर राख्छ। तर, यो पनि कि यो पात्र नायक कसरी विकसित हुन्छ भनेर। किनकि यो पुस्तकहरूबाट हो जहाँ तपाईं यो जान्न लाग्नु भएको छ कि पृष्ठहरू मार्फत कसरी परिवर्तन हुन्छ र पागलपनमा झर्छ, लगभग नचाहे पनि, तर लेखकले यसलाई हातले लिन्छन्।
स्टीफन किंग: जस्तो म लेख्छु
हामीले पहिले तपाईलाई भनेको छु, स्टीफन किंग एक डराउने लेखक मात्र होइन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ भने कि तपाइँ धेरै गलत हुनुहुन्छ किनभने, स्टीफन कि byका सब भन्दा राम्रा पुस्तकहरू मध्ये, As I I Writing, जसले लेखनको लागि आफूलाई समर्पण गर्न चाहान्छन् तिनीहरूको लागि एक उत्तम पुस्तक हो।
र यो यो हो कि लेखक आफैं कसरी सफल लेखक बन्न पुगे भनेर चिन्तित गर्न खोज्छन्, आफ्ना रचनाहरू बारे अहिलेसम्म अज्ञात विवरणहरू दिन्छन्, तर सफल लेखक बन्न चाहनेहरूको लागि विचार र सल्लाह पनि दिन्छन्।
हामीले पहिले तपाईलाई भनेको छु, कैरी यो स्टीफन किंगको पहिलो उपन्यास थियो। उसले के ग ?्यो? यसलाई टाढा फाल्नुहोस् किनभने म उनलाई विश्वास गर्दिन। यद्यपि, उनकी श्रीमतीले यो उद्धार गर्‍यो, र हामी यो मान्छौं कि उनले यो पढी पछि उनले आफ्नो पतिलाई यो समाप्त गर्न र प्रकाशकलाई पठाउन मनाउन भने। र उसले गरेको भलाइ धन्यवाद।
कथा एक केटी मा केन्द्रित छ जो उनको हाई स्कूल को साथीले दमन गरेको छ। र निस्सन्देह, एक समय आउँछ जब उनले शक्तिको विकास गर्दछ र उनीहरूले गरेका सबै कुराको बदला लिनको लागि प्रयोग गर्न थाल्छ। एक क्लासिक र सबै भन्दा राम्रो स्टीफन किंग पुस्तकहरू।
स्टीफन किंग: डार्क टावर
व्यक्तिगत रूपमा, डार्क टावर स्टीफन किंगको सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हो। र केहि चीज जुन धेरैलाई थाहा छैन त्यो यो एक साधारण कवितामा आधारित छ। हो, एक मध्यम-लम्बाई कविताबाट, किंगले धेरै पुस्तकहरू मिलेर बनेको गाथा बनायो।
पहिलो, जो कि गाथा शुरू गर्दछ, एक सबैभन्दा भारी पढ्न को लागी हुन सक्छ, तर यदि तपाईं "खराब शट" पास गर्नुभयो भने, दोस्रो बाट तपाईं पढ्न रोक्न सक्षम हुनुहुने छैन। अवश्य पनि, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाईंसँग सबै यो हातमा छ किनकि हामी भन्छौ कि तपाईले अगाडि एउटा नबताईकन एउटा बनाउन लाग्नु भएको छैन ताकि कुनै पनि कुरा बताईएको छैन।
यी पुस्तकहरूमा तपाईं आतंक फेला पार्नुहुनेछ, लेखकमा सामान्य जस्तो, तर रहस्य, मित्रता, प्रेम ...
कुनै पनि लेखकका लागि, सत्य यो हो कि मिस्री लगभग पढ्नुपर्दछ। र यो त्यो हो, यदि तपाईंले बुझ्नुभयो भने, थोरै पुस्तकहरूको नायकको रूपमा लेखक छन्। अन्य प्रकारका व्यवसायहरू सँधै छनौट गरिन्छ, पाठकहरूको नजिक हो जसले ती प्रकारका पुस्तकहरू पढ्छन्।
तर यस अवस्थामा, राजाले यसका एक लेखक र फ्यान राख्ने छनौट गरे। र संयोगवश चरम गर्न यो लिनुहोस्। र यहाँ तपाई कसरी "स्वस्थ" सम्बन्ध विकृत हुन सक्छ र सबैभन्दा ठूलो आतंक हुन सक्छ देख्न सक्नुहुन्छ।
स्टीफन कि:: ड्रीमकेचर
यदि तपाईंले फिल्म देख्नु भएको छ भने अब तपाईं आफ्नो सम्झनाहरू रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ किनभने पुस्तकले उनीहरूले बनाएको त्यो अनुकूलनको तुलनाको कुनै महत्त्व राख्दैन। ड्रीमक्याचर स्टीफन कि's्गको एक उत्कृष्ट पुस्तक हो र त्यो हो यो नायकको विचारमा अविश्वसनीय तरिकाले छुटकारा दिन्छ, एकै समयमा यसले हामीलाई मौलिक कहानी प्रस्तुत गर्दछ।
थप रूपमा हामी तपाईंलाई यो पनि भन्दछौं कि कुनै खास समयमा उनीहरूले तपाईंलाई अरूहरू जस्तै अपरिचित चीजहरू वा गनीहरू सम्झाउँछन् कि कुनै खास "विशेष" चरित्रको अर्थमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » सर्वश्रेष्ठ स्टीफन किंग पुस्तकहरू
लांग मार्च र जनावरको चिहान
किंग जीवित उदाहरण हो कि गुणवत्ता, समर्पण र प्रतिभाको पनि व्यावसायिक प्रभावहरू छन्। उहाँ एक उदात्त लेखक हुनुहुन्छ र बिक्रीमा उसको सफलताले धेरै व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ।
सबै भन्दा राम्रो काल्पनिक पुस्तकहरु